FAQs - Ningbo Nide Farsamada Co., Ltd
1.What waxaan u baahan nahay for armature fuuli jiray oraah mashiinka
Si aad u talinaynaa model mashiinka ku haboon iyo in la siiyo oraah Sida laga soo xigtay, waxaan u baahan nahay sawir armature iyo jaantuska loogu fuuli jiray oo ay ku jiraan dhexroor silig oo u soo jeesan tirada, oo looga baahan yahay, waayo, awoodda wax soo saarka.
2. Ganacasiyada waxaan u baahan nahay for stator fuuli jiray oraah mashiinka
Waxaan u baahan nahay sawir stator, fuuli jiray jaantuska ku jiraan dhexroor silig oo u soo jeesan tirada. In si ay u shaqeeyaan tiro mishiinka, waa in aan ogaado looga baahan yahay, waayo, awoodda wax soo saarka.
3.What waxaan u baahan nahay for oraah commutator
Waxaan u baahan nahay sawir commutator oo ku xusan cabbirka faahfaahsan iyo wax. Haddii macaamiisha ma aha cad oo ku saabsan waxyaabaha la, waxaan ku talinaynaa laga yaabaa waxyaabaha ku haboon sida uu codsiga. Sidoo kale waxaan u baahan nahay in la ogaado tirada looga baahan yahay per si.
4. Waxa aynu u baahan tahay armature oraah mashiinka miisaamid
Waxaan leenahay laba nooc oo isu dheelitira mashiinka: Miisaanka darista iyo Miisaanka Removing.For talineyso model mashiinka ku habboon, waxaan u baahan nahay sawir armature, miisaanka armature, qiimaha bilowga dheeliyaan, oo la aqbali karo qiimaha dheeliyaan haraaga ah & awoodda wax soo saarka looga baahan yahay.
5.What Isbarbar u dhexeeya DC iyo AC motor
DC motor leeyahay faa'iidooyinka ah deg deg ah uga jawaab, Xuddunta upka weyn iyo siiyaan qiimeeyo Xuddunta u dhexeeya 0 iyo qiimeeyo xawaaraha wareeg, laakiin ay faa'iido sidoo kale waa ay khasaaro, maxaa yeelay baahida loo qabo motor DC in ay curiyaan Xuddunta joogto ah hoos Xuddunta qiimeeyo, waxa ay u baahan doontaa commutator iyo burush carbon . Laakiin commutator iyo carbon burush ka dhigi doonaa sida dhimbiil oo budo kaarboon inta lagu jiro wareeg motor, waxa uu dhaawici doonaa qaybaha motor waxayna leedahay xadka codsiga.
AC motor laha burush carbon iyo commutator, ma maintainence baahan, adag oo si weyn loo isticmaalo. Laakiin waxaa u baahan doontaa technology gacanta adag haddii u baahan si loo gaaro qaab la mid ah la DC motor. Waxaa jira laba nooc oo AC motor: motorand asynchronous motor synchronous. Waxaa jira saddex nooc motor ofasynchronous sida lambarka wajiga stator ah: motor phaseasynchronous hal, laba motor phaseasynchronous iyo saddex motor phaseasynchronous. Qaab-dhismeedka saddex motor phaseasynchronous waa mid fudud, lagu kalsoonaan karo iyo qiimaha hoose.
6.What waa mabda'a shaqeynta of motor brushless
motor brushless DC ansixiyeen qalab commutating korontada halkii qalab dhaqan farsamo commutating (commutator iyo burush carbon), waxa keliya oo aan sii sharciyeynta xawaare fiican iyo muuqaalada laga bilaabo of DC motor, laakiin sidoo kale waxa uu ka faa'iidaystaan ​​AC motor, sida qaab-dhismeedka fudud oo sahlan maintainence iwm
DC motor brushless uu leeyahay qaab ciyaareed wanaagsan oo xasilloon, sidaa daraadeed waxa uu si deg deg ah developped sannadihii la soo dhaafay. armature The of motor dhaqanka DC waa rotatory, iyo tiir magnetic waa ma guurto ah, laakiin motor brushless DC waa on lid ku ah, pole magnetic waa rotatory, armature waa ma guurto ah, commutating ee armature fuuli jiray waxaa lagu gaari karaa by shidma booska iyo circuit ku biiro korontada.
Sida caadiga ah, DC motor brushless ka kooban yahay motor, shidma booska iyo biiro korontada. motor Electric ka kooban tahay multi-waji (saddex waji, afar waji, shan waji ECT.) armature loogu fuuli jiray iyo stator iyo rotor magnetic joogto ah la certaina tiro cayiman oo cirif-labo-labo. AA, BB, CC taagan saddex waji stator loogu fuuli jiray, NS waa pole magnetic joogto ah, waa armature motor ayaa, PS waa shidma booska armature oo isku xira on usheeda dhexe la mid ah aramture motor ah, BG1, BG2, BG3 waa tube biiro xoog ah circuit ku biiro korontada, saddex waji loogu fuuli jiray ABC waxaa serial xiran BG1, BG2, BG3 siday u kala horreeyaan, ka dibna ku xirmaan il awoodeed oo ka. Mabda 'tallaabo Its waa: PS siin signal a in la xakameeyo BG1, BG2, BG3 iyo off, marka tube biiro xoog ah, waxaa jiri doona hadda maraan stator dhiganta loogu fuuli jiray, oo dhalin field magnetic, duurka ku magnetic ula falgalaan pole magnetic of rotor joogto ah iyo dhalin Xuddunta si ay u sameeyaan armature motor isku shaandheyn, sida shidma jagada ku xiran on usheeda dhexe isla of motor, si ay armature isku shaandheyn doonaa waqti isku mid ah iyo siin signal in BG1, BG2, BG3 habsami leh si loo xakameeyo tube biiro xoogga on iyo off, si loo sameeyo hadda ee armaturecommutating habsami leh oo ay la socdaan meel armature ku beddelo, oo waxaad ka samaysaa duurka ku armature magnetic isku shaandheyn in la labanlaabo hab, sidaas armature motor dhawri doonaa qoqobada continously.
7.What waa Qoondaynta ee saa'idka
First. Kala saaro sida uu jihada loading ama xagal xiriir magacaaban:
(1) saa'idka radial --- inta badan loo isticmaalaa loading jihada radial, ay xagal xiriir magacaaban yahay inta u dhaxaysa 0 iyo 45, sida xagal xiriir magacaaban, lagu qaybin karaa: xiriir radial sita --- xagal xiriir magacaaban waa 0 ; iyo nooca uu saa'idka xagal xiriir - xagal xiriir magacaaban yahay inta u dhaxaysa 0 iyo 45.
(2) saa'idka durkiyo --- inta badan loo isticmaalaa loading jihada axial, ay xagal xiriir magacaaban yahay inta u dhaxaysa 45 iyo 90. Oo per xagal xiriir magacaaban, lagu qaybin karaa: saa'idka xiriir axial - xagal xiriir magacaaban yahay 90; iyo farahooda xagal saa'idka xiriir --- xagal xiriir magacaaban yahay inta u dhaxaysa 45 iyo 90.
Second. Kala saaro sida uu jidhka rogid:
1). Ball sita --- jidhka diidanaa waa kubadaha;
2). dhalista rullaluistemadka --- jidhka rogid waa duuban. Sida nooca isaguu ku, waxaa loo qaybin karaa: dhalista rullaluistemadka cylindrical ---- jirka rullaluistemadka waa rullaluistemadka cylindrical, cimri rullaluistemadka cylindrical / dhexroor ka yar ama la mid ah 3; Oo saa'idka irbad --- jirka rullaluistemadka waa irbad.
Saddexaad. Kala saaro sida uu sheegay is-waafajin ama ma:
1). Is-simaya dhalista --- Jidka rullaluistemadka waa is-waafajin, canadapt in ay kala duwan yihiin xagal iyo dhaqdhaqaaqa xagal of dhidibka laba rullaluistemadka jidka ee;
2). saa'idka Non is-waafajin (saa'idka adag) --- hortagi karaa xagasha mowjadda of dhidibka of laba Waddooyinkiisa duuban.
Tan afraad. Kala saaraan sidii ay tirada xigta ee jirka isaguu ku:
1). saa'idka isku xigta Single --- leeyahay jirka isaguu isku xigta kaliya,
2). saa'idka isku xigta Double --- leedahay laba saf oo jirka duuban,
3) saa'idka Multi-xigta --- leeyahay-xigta multi ee jirka duuban,
Fifth. Kala saaro sida uu sheegay in qaybaha dhalmada ee la kala saari karaan:
1). saa'idka Separatable --- leedahay qaybaha separatable;
2). saa'idka Inseparatable --- siddo dhalista aan la kala saari karo ka dib markii ururinayo si fiican;
Sixth. Kala saaro sida ay size dhalista (dhexroor dibadda ah):
(1). saa'idka Micro --- guutada magaceed waa yar yahay 26mm;
(2). saa'idka Small --- guutada magaceed waa 28 ~ 55mm;
(3). saa'idka yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka --- guutada magaceed waa 60 ~ 115mm,
(4). saa'idka Dhexdhexaad iyo weyn --- guutada magaceed waa 120 ~ 190mm,
(5). saa'idka Large --- guutada magaceed waa 200 ~ 430mm,
(6). saa'idka baxsan --- magaceed guutada ka weyn tahay 440mm.
8.What waxaa kubada jeexdin qoto dheer sita?
saa'idka Ball, sidoo kale loo yaqaano anti-saa'idka khilaaf, waa macdan ah oo yar ama dhinacyo dhoobada isticmaalaa si loo yareeyo khilaafka u dhexeeya fallaadhihii oo ulahooda wareejiya ee tiro ka mid ah codsiyada. saa'idka Ball ayaa badanaa loo isticmaalaa in taxane ah si uu u nuugo oo miisaankeedu yahay kaalinta on qayb ka dhaqaaqin, ama baqashada shaqsi si loo yareeyo khilaafka kiniisadaha dariiq dhexaad. Inta badan waxaa la soo saaray si uu ula kulmo heerarka aad u ba'an ee roundness, tan iyo lahayo ku kasta oo keeni kara qaybaha uu u dhaqaaqo si lama filaan ah ku guuldareystaan.
Fikradda ah saa'idka kubad la ogan karo jidka dib ugu Roman Empire oo dhan, laakiin ilo badan oo amaah Leonardo da Vinci la naqshado marka hore wax ku ool ah. Waxa aan ahaa ilaa 1791, si kastaba ha ahaatee, marka la Welsh gaare qaadee iyo hindisa magacaabay Philip Vaughan xiranayo shirkii ugu horeeyay ee dariiq dhexaad si ay u isticmaalaan. oo ulahooda wareejiya Previous qaadee danbeyn xiranayo oo ka soo baxay saamaynta khilaaf, laakiin Vaughan ee isticmaalka saa'idka kubada reebay xiriir toos ah oo u dhexeeya usheeda dhexe drive iyo dariiq dhexaad.
Ka dib markii ay isticmaalka hore ee fallaadhihii drive, injineerada warshad helay codsiyada kale ee saaxadda ku soo saarka. qaybo Individual si fudud loo dhaqaajin karin meelaha qalabaysan saa'idka kuwan. mashiinada Motor-driven noqday wax ku ool ah sida ay hoos khilaaf u dhexeeya qaybaha. Si ka duwan noocyada kale ee saa'idka, saa'idka kubada u ogolaan waayo, Rotary iyo axial dhaqdhaqaaqa labada, kaas oo intaa ku daray in ay miday design mashiinka.
Mid ka mid ah tusaalooyinka ugu badan ee saa'idka kubada in tallaabo waa qalfoof isaguu ku. Afar giraangirood oo ku xiran yihiin laba ulahooda wareejiya on hoose ee boot a. kormeerka A dhow giraangiraha, kuwaas oo shaaca ka qaaday a collection of kubadaha biraha yar yar ee ku hareereysan dariiq dhexaad ah. Sida skater ah meelaha isaga ama iyada miisaankeedii dhan yahay on giraangirihiina, kubad kasta nuuga load ku meel gaar ah. Sida skater hore riixo, laga rogo in track ku hareeraysan dariiq dhexaad ah. Maxaa yeelay, saa'idka kubada yihiin dhammaataan wareegsan oo siman, waxaa jira khilaaf aad u yar ahbaa u dhaxeeya. Waxay u ogolaadaan skater ah inuu u dhaqaaqo in xariiq toosan leh iska caabin yar.
Soo saarta saa'idka kubada waa la yaab leh la mid ah sameynta kubadaha cajiinka. sahayda A ee xarigga biraha qiyaastii dhexroor la mid ah sida saa'idka ah waxaa la dhigayaa in mashiinka leh laba tumeen sidii loogu tala galay sida barka. Markii ay labada toortaha waxaa si xoog ah isu keenay, kubad birta xunxunna waxaa la aasaasay. Dhibaatada waxa ay tahay, qaar ka mid ah jaakada qarxa bir dheeraad ah u yeedhay Laydh iftiimaya weli. kubadaha waxaa markaa lagu meeleeyay mashiinka kale oo ka saaraysaa Ilbidhiqsi in la abuuro dawlad kaamil ah roundness.
mashiinka labaad wuxuu ka kooban yahay laba birood dilaaca, mid ka mid ah la sii uruursanayey talooyinka furan si ay u helaan saa'idka kubada. Sida mishiinka buuxiyaa kubadaha diiqid, saxanka sare dilaaca uu bilaabo inuu weecin in jiho oo kala duwan ka badan waslad khafiif ah oo aan dhaqaaqayn hoose. Tallaabadan waxaa ay la mid tahay cunto kariye isticmaalaya isaga ama iyada gacmahooda si ay u sameeyaan kubadaha cajiinka. baxsad hore mishiinka ka saaraysaa Laydh iftiimaya oo ka caawisaa saa'idka ah si cadaalad ah noqon uniform ee size.
baxsad A labaad iyada oo loo marayo mishiinka isku darayaa dareere ah cabbeeyo iyo abrasives in ay isku dhafka ah. saa'idka kubada waxaa dhulka hoos si size a sax ah by tallaabada ee abrasives ah. Marka kubadaha gaadhay size la aqbali karo iyo midayso, saddexaad ordaa isticmaalaa wakiilka nadiifinayo a inaad iyaga siinaysid iftiimo khilaaf-dhimista ah. All of saa'idka ah waxaa la siiyaa hal kormeerka final si uu u hubiyo qaladaadkeyga hor inta aan la ansixiyey si loogu isticmaalo codsiyada kale
9.How commutator iyo burush carbon shuqulka hawsha u sameeyo?
A bar commutator hal waa goosin ka mid ah copper ku xiran mid ka mid ah dhammaadka gariiradda armature ah. Laba baararka commutator for gariiradda kasta, ku xiran yihiin dhinacyada ka soo horjeeda ee xidhiidhka ka shaft.Electrical la sameeyo adiga oo riixaya burush carbon ka dhanka ah baararka commutator ah, tani waxay u oggolaanaysaa ka qodaa in ay isku shaandheyn halka samaynta xidhiidhada korontada marka baararka copper waa in contatct burush carbon ah .
Laba burush carbon waxaa loo isticmaalaa, mid togan iyo polarity negative kale. Halkaa marka ay marayso qaar ka mid ah in wareeg ee ka qodaa qataarrada copper yihiin in ku lifaaqan gariiradda waa in jago sida in bar copper kasta ka yar yahay mid ka mid ah burush carbon ah. burush A positve koronto xiriiriya bar copper on commutator iyo korontada qulqulka ka sahayda ay xoog u wanaagsan iyada oo burush carbon ah iyo bar copper in uu yahay waxa underneth ah. Power sii wadaan in ay soo qulquli ka bar copper ah via silig ku xiran yahay iyo gariiradda. Dhamaadka kale ee gariiradda awood u baxo maraa silig iyo bar copper kale oo ku soo laabanaya xidhiidhka korontada negatve via burushka negative dhamaystirka xidhiidhka ka korontada.
Sida qodaa waa wareegto ulood oo copper ah guurto underneth burush ah in la dhiso xiriir ah korontada iyo sida wareeg sii this biririf la xidhiidha korontada sida baararka copper ka guurto ka underneth baxay. Sida usheeda dhexe ay sii shaandheyn baararka copper mar kale ku iman in aad la xiriirto leh burush iyo dib-u-dhiso xiriir koronto. Laakiinse haatan baararka copper waxyaalahan waxaa loo xira u burush polarity soo horjeeda tan iyo usheeda dhexe ee markan ayaa qabtay waddammo kaliya 1/2 of jeedo a.
Eeg waxa at jid kale u ogolaanaysaa calaamadiso ulood oo copper ah A & B iyo burush Carbon ku POS & NEG. Initally ah "A" bar copper ku xiran burush POS iyo B in burush NEG ah. usheeda dhexe ayaa daba noqonayaa 1/4 jeedo iyo korontada ma xirmaan waxaa ka dhigay sida "A" bar copper waa inyar keentay ku burush POS & NEG (sida uu yahay bar B sidoo kale). usheeda dhexe ayaa sii wadda in ay u guuraan ay sabab u tahay momentium iyo "A" bar copper dhawaado burush NEG sida usheeda dhexe ay sii iilan oo ugu danbeyn uu abuurayaa xiriir korontada. Isla mar ahaantaana copper bar B waxaa lagu sameynayo xiriir burush POS.
10.What waa kala duwan ee loogu fuuli jiray mashiinka?
silig Caadi ahaan, mashiinka fuuli jiray proceeed copper, silig aluminium, silig Alxan iwm
Sida codsigaaga mishiinka loogu fuuli jiray ayaa, waxaa jira laba nooc oo fuuli jiray mashiinka: nooca guud iyo nooca heegan ah.
nooca Guud - haboon loogu fuuli jiray dhowr nooc oo ah wax soo saarka, kaliya waxay u baahan yihiin in la beddelo tooling.
nooca go'an - kaliya ku haboon loogu fuuli jiray mid ka mid ah wax soo saarka gaar ah.
Mashiinka winiding nooca quduuska caadiga ah waa sida soo socda:
1. Gaarka ah ee transformer square - (. Silig qaro weyn oo silig khafiif ah)
2. Gaarka ah ee giraanta transformer - (giraan weyn, giraanta dhexe iyo giraanta yar)
3. Noocyada kale ee transformer.
1. Gaarka ah ee motor taageere - (taageere badsho, taageere saqafka, taageere box);
2. Gaarka ah ee toy micro motor - (nooca waraaqdan, fuuli jiray nooca gaarka ah madaxa);
3. gaarka ah ee nooca taxane gariiradda armature;
4. Speicial for motor jajab iyo motor hooras weyn.
1. Gaarka ah ee frequence dhexe iyo inductance code midabka,
2. Gaarka ah ee gariiradda magnet giraanta inductance yar;
3. Gaarka ah ee sanduuqa samaacad inta jeer gariiradda qaybinta;
4. Gaarka ah ee barretter laambad dhaadheer.
Kale gariiradda cod samaacad:
1. Gaarka ah ee gariiradda cod samaacad;
2. Gaarka ah ee tube kulaylinta korontada,
11.What yihiin kala soocidda ee loogu fuuli jiray mashiinka.
nooca si buuxda automatic:
Waa mishiin qalabaynta sare wuxuu ka kooban yahay motor, qaybaha korontada, qaybaha pneumatic, hab la isugu gudbiyo, shidma, nidaamka gacanta etc..Usually, waxaa gaari karo si toos ah loogu fuuli jiray, goynta silig, load iyo dajinaya workpiece. Hawl oo kaliya u baahan tahay si loo hubiyo in wax xumu waa ku filan, iyo beddeli workpiece ama silig copper operator timely.One qaadan kartaa daryeelka mashiinno dhowr ah.
Advantage: Hawl tababar u baahan jirin, hufnaan wax soo saarka sare, xitaa tayada wax soo saarka, continously shaqeyn karaan muddo dheer.
Qasaaro: Price uu ka badan yahay mashiinka semi-auto, iyo u baahan tahay farsamo xirfadeed si loo hubiyo orodka mishiinka, maintainence waa wax yar oo dhib badan, oo ay adag tahay in la beddelo nooca wax soo saarka.
Ku haboon prodution mass of hal hal nooc-soo-saarka.
Waxaa ugu ballaaran loo adeegsaday Shiinaha, kaliya qabsan karo, winding.Convenient si toos ah in la beddelo tooling in ay soo saaraan alaabta diffierent.
Advantage: Price waa ka raqiisan, operator buuxin kartaa qaar ka mid ah technology oo aan lagu gaari karaa by mashiinka, haboon in la beddelo nooca wax soo saarka.
Qasaaro: baahida loo qabo shaqada dheeraad ah aadanaha, iyo shaqaale u baahan tahay in la tababaray.
Habboon ee loogu talagalay soo-saarka qiimo jaban, soo saarka cusub oo dhawr nooc oo produsts la soo saarka hoose.
Sida laga soo xigtay qaabka loogu fuuli jiray, waxaa loo kala qaybin karaa: gariiradda fuuli jiray mashiinka, nooca xaashidan machin loogu fuuli jiray, mashiinka fuuli jiray saddex dhinac-cabbir ah.
Gariiradda mashiinka loogu fuuli jiray,
isku bedbedeli doono dunmiiqa, ay la shaqeeyaan saddex dhaqaaqaan meel cabbir ah iyo qaabkaaga si ay u soo diyaariyeen silig on workpiece te ku surface.Usually loo isticmaalo transformer, inductor oo kala duwan oo gariiradda.
Flyer nooca loogu fuuli jiray mahcine:
Anfaco matoorrada in la wado xaashidan si winding.Usually loo isticmaalo armture loogu fuuli jiray.
Saddex mashiinka waji loogu fuuli jiray,
Ku haboon hab gaar ah loogu fuuli jiray ee speicial products.Usually loo isticmaalo loogu fuuli jiray stator iyo waxyaabaha gaarka ah.
12.What waa motor induction?
Mid ka mid ah motorused korontada ugu badan ee codsiyada ugu badan oo loo yaqaan motor induction. motor Tani waxaa kaloo lagu magacaabaa sida motor asynchronous maxaa yeelay waxa ay waddaa xawaare ka yar tahay xawaaraha synchronous. In this, waxaan u baahan nahay si ay u qeexaan waxa uu yahay xawaaraha synchronous. xawaaraha Synchronous waa xawaaraha wareeg ah fieldin ku magnetic mashiin Rotary iyo waxa ay ku xiran tahay inta jeer iyo tirada ulo ka mishiinka. motor induction An had iyo waddaa xawaare ka yar tahay xawaaraha synchronous sababtoo ah beerta ku qoqobada magnetic kaasoo lagu soo saaro stator ka dhalin doonaa ka daadanayo in rotor taas oo ka dhigi doonaa rotor in ay isku shaandheyn, laakiin ay sabab u tahay gaabiyo ee hadda korontada ka daadanayo in rotor la daadanayo hadda korontada ee stator ah, rotor ah inuusan weligiisna gaari doonin in rotatingmagnetic ay xawaaraha beerta ie xawaaraha synchronous. asal ahaan Waxaa jira laba nooc oo motor induction tiirsan siin talooyin ah - hal motor induction wajiga iyo saddex wajiga motor induction. Single motor induction wajiga ma aha bilaabo motor is a iyo saddex wajiga motor induction waa motor is-bilaabaya. Hadda guud ahaan waxaan u baahan nahay in la siiyo laba sahayda ie excitation double in la sameeyo mashiin inuu isku shaandheyn. Tusaale ahaan haddii aan ka fiirsan motor DC ah, waxaan ku siin doonaa mid ka mid ah sahayda ay u stator iyo kale in rotor iyada oo loo marayo nidaamka burush.
13.What waa Mabda'a Working ee Induction Motor?
Laakiin motor induction waxaan ku siin siin mid ka mid ah oo kaliya, sidaa daraadeed waxa runtii xiiso leh in la ogaado in sida ay u shaqayso. Waa mid aad u fudud, ka magaca laftiisa waxaan u garan karaa in uu jiro nidaamka induction dhacay. Dhab ahaantii marka aan ka bixinayso sahayda ay u stator ku fuuli jiray, ka daadanayo ay abuuri doonaan in gariiradda sabab u socodka ah ee hadda korontada ee gariiradda. Haddaba rotor ku fuuli waxaa loo qabanqaabiyaa sidan oo kale in ay gaaban noqdo circuited in rotor laftiisa ah. daadanayo ka stator ka baabbi'in doonaa gariiradda in rotor iyo tan gariiradda rotor waa gaaban circuited, sida sharciga waafaqsan Faraday ee induction electromagnetic, korontada bilaabi currentwill dal ee gariiradda of rotor ah. Marka hadda korontada duuli doona, dheecaan kale oo aad ahbaa doonaa rotor ah. Hadda waxaa jiri doona laba ka daadanayo, mid waa ka daadanayo stator oo kale waa ka daadanayo rotor oo ka daadanayo rotor in ay ka daadanayo stator la danbayso doonaa. Sababo la this, rotor ka dareemi doontaa Xuddunta ah taas oo ka dhigi doonaa rotor in ay isku shaandheyn jihada of qoqobada ka daadanayo magnetic. Sidaas xawaaraha rotor la xirnaan doonta sahayda ac iyo xawaaraha lagu xakameyn karaa by kala duwan siin talooyin ah. Tani waa mabda'a shaqo motor induction nooca mid ah.
14.Why waa Saddex Phase Induction Motor Self Bilaabista?
In saddex nidaamka wajiga, waxaa jira saddex line hal waji oo 120 farqiga ° wajiga. Sidaas field magnetic ku qoqobada qabo farqiga isla wajiga taas oo ka dhigi doonaa rotor ah in ay u guuraan. Haddii aan ka fiirsan saddex weji a, b iyo c, marka wajiga la magnetized, rotor u dhaqaaqi doono dhinaca wajiga ah loogu fuuli jiray, in ay xilligan soo socda wajigii b heli doontaa magnetized oo soo jiidan doona rotor iyo ka badan wajiga c. Sidaas rotor ay sii wadi doonto in ay isku shaandheyn.
15.Why Single Phase Induction Motor aan Self bilaabo?
Ka hor in aan u baahanahay in la ogaado sababta hal motor induction wajiga ma aha motor is bilaabo iyo sida dhibaatada ka adkaada. Waxaan ognahay in sahayda ac waa la ruxruxo sinusoidal oo waxay soo saartaa field magnetic gaba gaboowday in stator isku qaybiyey loogu fuuli jiray. Tan iyo markii ay duurka pulsatingmagnetic la malaysan karin sida laba oppositely qoqobada beeraha magnetic, waxaa jiri doona ma Xuddunta sababtay saaray at upka iyo sabab u this motor ma ordi. Ka dib markii la siiyo sahayda, haddii rotor la sameeyo inuu isku shaandheyn in labada jiho xoog dibadda, ka dibna motor ka bilaabi doonaa in uu ordo. Dhibaatadaan ayaa lagu xalin by samaynta stator ku fuuli jiray laba loogu fuuli jiray, mid waa weyn ee loogu fuuli jiray oo kale waa kaabayaal loogu fuuli jiray iyo capacitor a fadhiya ee taxanahan la kaabayaal ku fuuli jiray. Tani waxay ka dhigi doonaa farqiga waji marka hadda duuli doona iyada oo gariiradda labadaba. Marka waxaa jiri doona farqi wajiga, rotor ka dhalin doonaa Xuddunta ah laga bilaabo iyo waxa ay bilaabi doonaan in ay isku shaandheyn. Xaqiiqo ahaan waxa aan arki karnaa in taageere aysan isku shaandheyn markii capacitor waa ineysan ka motor, laakiin haddii aan gacan shaandheyn waxay bilaabi doonaan in ay isku shaandheyn. Sidaas tani waa sababta oo ah adiga oo isticmaalaya capacitor ee motor wajiga hal induction ah. Waxaa jira dhawr faa'iido of motor induction taas oo ka dhigaysa motor si aad u leedahay codsiga guud. Waxaa isagoo kor u oolnimada wanaagsan in 97%. Laakiin xawaaraha baabuurta ee kala duwan leh load la siiyay motor taas oo khasaaro ah oo motor this. jihada wareeg of motor induction si fudud loo beddeli karo by beddelo isku xigxiga ee saddex sahayda wajiga, taas macnaheedu waa haddii RYB waa jihada weerarka, RBY ka dhigi doonaa motor si isku shaandheyn jihada dambe. Tani waa in ay dhacdo saddex motor wajiga laakiin hal motor wajiga, jihada beddeli karo by beddelaaya boosteejada thecapacitor ee loogu fuuli jiray.
16.What waa Faa'iidooyinka iyo dirka motor wajiga Single
Ujeedooyinka hillaac iyo guud ee guryaha, xafiisyada, dukaamada, warshado yar nidaamka wajiga kaliya waxaa si balaadhan looga isticmaalaa marka loo eego saddex nidaamka wajiga sida nidaamka wajiga kaliya waa ka dhaqaale badan oo looga baahan yahay awoodda ugu badan ee guryaha u ah, dukaamo, xafiisyada yar yar yihiin, kaas oo si fudud loo fulin karo iyada oo nidaamka wajiga kaliya. The matoorrada wajiga kaliya waa fudud ee dhismaha, cheap in kharashka, lagu kalsoonaan karo oo ay fududahay in la dayactiro oo ay hayaan. Sababo la faa'iidooyinka oo dhan motor ka wajiga hal helaa codsiga in huufarka, taageerayaasha, mashiinka dharka lagu dhaqo, bamka culus, Dami, mashiinka dharka lagu dhaqo, alaabta lagu ciyaaro yaryar iwm
The matoorrada ac wajiga kaliya waxaa ay u sii kala saaraa sida:
wajiga 1.Single matoorrada induction ama matoorrada asynchronous.
wajiga 2.Single matoorrada synchronous.
17.What waa Noocyada saddex waji motor induction
motor Induction waxaa kaloo loo yaqaan motor asynchronous sida ay waddaa xawaare ka duwan la xawaaraha synchronous. Like motor kale korontada kasta, motor induction leeyahay laba qaybood oo kala ah rotor iyo stator.
rotor waa qayb ka mid ah qoqobada of motor induction. rotor waxaa ku xiran load farsamo iyada oo qodaa. rotor The of motor saddex waji induction waa RIKU waxaa sii xogo
Dabagaale rotor qafis,
Warqada giraanta rotor ama ku dhaawacay rotor ama wajiga rotor boogta.
Iyada oo ku xidhan nooca rotor isticmaalo motor saddex waji induction waxaa lagu tilmaamay inay RIKU
Dabagaale motor induction qafis
Warqada motor giraanta induction ama ku dhaawacay motor induction ama wajiga induction boogta motor
Sida ay magac tilmaamaya stator waa qayb ka mid ah taagan of motor induction. A sahayda saddex wajiga waxaa la siiyaa stator ee motor induction.
18.What waa mabda'a shaqada ee NIDE ND- LAW-5B2 armature fuuli jiray amchine ah
XEERKA-5B2 mashiinka fuuli jiray rotor ND- wuxuu qaadanayaa 2 madax fuuli jiray in la wado, si qaab dhismeedka waa mid aad u fudud. The fuuli jiray motor Howlsocodsiinta ciidanka wareejiyo usheeda dhexe ugu weyn iyo labada sanduuq loogu fuuli jiray go'an yihiin miiska hoostiisa, sanduuqyada slide ku xiran yihiin sanduuqa hoose by 4 dalaka dhalista, hore iyo gadaal ah sanduuqa slide ee la eryay by 2 dhululubada . safarku waa weyn waxaa loogu talagalay dhow caaryada halka safarka yar oo si deg deg ah u beddeli caaryada.
19.What waa mabda'a Work of NIDE mashiinka fuuli jiray buuga
1.This fuuli jiray mashiinka islana dhismeedka flyers double, 1kW 1set motor Howlsocodsiinta wadin ee wareeg laba flyers, iyo motor 400W tusmaynta Howlsocodsiinta. Intii lagu guda jiray shaqada, armature la xiri xidh laba Nos fuuli jiray tooling iyo qalab ku tirtirayaan. Marka flyers waxaa socda, silig maraa haysta silig, qalab xiisad ka dibna galo dunmiiqa godkii, soo baxa oo ka silig saraysa wheel, ka dibna bogagga silig galay booska armature ku dhex wheel Hanuun silig xaanshiyahan. Ka dib markii tallaabadan, gelin armature galay Afyare inay sameeyaan loogu fuuli jiray.
2.This mashiinka islana nidaamka Howlsocodsiinta inay sameeyaan loogu fuuli jiray. Dhanka kale, tallaabo mashiinka gacanta midabka dhabta ah aadanaha-mashiinka PLC xakamaysada ah; tusmaynta armature gacanta weyn motor lugaha xooggiisa; xawaaraha Howlsocodsiinta gacanta double xawaaraha flyers wareeg. Waxaa intaa dheer, mishiinka uu leeyahay hawlaha kale, sida xawaaraha kordhaya gaabis ah marka laga bilaabo, Max. xadka xawaaraha, waqtiga kala jejebiyey, CW & CCW wareeg, tirinta pre-set, iwm Iyada oo shaqo oo dhamaystiran iyo orodka lagu kalsoonaan karo, mishiinka sahlan tahay hawlgalka.
kulanka mashiinka 3.Beerta gacanta dhululubo pneumatic, waxqabadka sare leh qiimo jaban. Waxaa ku qalabeysan saxan shaqeeya, si ay u hawlgala sahlan.
Mashiinka 4.The islana signal nidaamka tirinta garaaca wadnaha PLC, kuwaas oo sax yahay 100%
20.BLDC motor mabda'a shaqeeya
matoorrada Brushless DC isticmaalaan qalabka Beddelashada Semiconductor si loo gaaro commutation electronic, taas oo ah, qalabka elektarooniga ah Beddelashada bedeli commutators xiriirka dhaqanka iyo burush. Waxay leedahay faa'iidooyinka isku halaynta sare, ma dhimbiiluhu commutation, qaylada farsamo yar yahay, iwm Waxaa si weyn loo isticmaalaa in kuraasta fasalka sare duubo, rikoorrada video, alaabtii elektaroonik ah iyo qalab xafiis qalabaynta.
matoorrada Brushless DC ka kooban yihiin rotors magnet joogto ah, multipole stators loogu fuuli jiray, oo dareemayaal booska. Satlaytaka Jago badala hadda ee windings stator si gaar ah sida ay isbeddel ah ee booska rotor ah (oo la, booska uu ka qaraabo pole rotor in stator ku fuuli la ogaado, iyo signal booska markii cadaadis ay ku ahbaa ee booska ka go'an , iyo la farsameeyo by circuit signal qaab beddelidda. si loo xakameeyo circuit ku biiro xoogga, sida ay xiriir macquulka qaar fuuli jiray Beddelashada hadda). danab hawlgalka ee stator ku fuuli waxaa bixiya ah circuit ku biiro elektarooniga ah ay gacanta ku soo saarka shidma booska.
dareemayaal Jago jira noocyo magnetic, photoelectric iyo electromagnetic.
A motor DC brushless isticmaalaya shidma a booska magnetically xasaasi ah ayaa element shidma magnetic ah (sida element Hall ah, diode a magneto-xasaasi ah, diode a magnetically-xasaasi ah, a magneto-resistor, ama wareeg ah codsi gaar ah isku dhafan) dhajinta on a shirkii stator. Si loo ogaado isbedel duurka ku magnetic ee ay magnet-joogto ah iyo rotors.
A motor DC brushless dhaqmaadka shidma a booska photoelectric leedahay shidma a photoelectric diyaarin on shirkii stator a at meel gaar ah. saxan fujiyaan A waxaa dhajinta on rotor ah, iyo isha nuur yahay diode fudud saaro ama buro iftiinka yar. Marka rotor ku wareegto, ay sabab u tahay tallaabo ah ee saxan fujiyaan ah, qaybaha photosensitive on stator ka dhalin doonaa calaamadaha garaaca wadnaha googo'an at inta jeer cayiman.
matoorrada Brushless DC la dareemayaal booska electromagnetic waxay leeyihiin qaybaha shidma electromagnetic (sida gudbiyeyaasha xigay, daaro dhawaanshaha, LC wareeggeedii resonant, iwm) on shirkii stator ah. Marka boos oo ka mid ah isbedel rotor magnet joogto ah, saamaynta electromagnetic ka dhigi doonaa shidma electromagnetic. Taliyaha Guud ee signal hirka sare ah meyxaanahaa (ay Ilodanimada kala duwan la booska rotor).